Igumbi Lasegadini - I-Airbnb
Le propathi yangoku, yestudiyo eyakhiwe ngo-2016 igqitywe kumgangatho okhethekileyo. Igumbi leGadi lelona khaya lifanelekileyo lokubalekela izibini ezifuna ukusinda kubuphithiphithi bobomi bemihla ngemihla. Ifakwe kwilali yaseWestmeston emazantsi eSouth Downs, le ndawo ikwindawo entle yokuhlola ilizwe elihle. Kukho ii-pubs ezimbini kumgama wokuhamba kwaye isixeko esiphilayo saseBrighton yimizuzu nje engama-30 ukuya emazantsi kunye nobutyebi baso beevenkile, iivenkile zokutyela kunye nemivalo.
Indawo yokuhlala enesicwangciso esivulekileyo ubukhulu besisa kunye nekhitshi / indawo yokutyela exhotyiswe kakuhle igcwele yonke into efunekayo ngexesha lokuphumla. Isofa enkulu ilungile xa uhleli phambi kweTV okanye umamele umculo ngezipika zebluetooth. Kwelinye icala legumbi kukho ibhedi ekhululekileyo elingana nenkosi enendawo eninzi yokugcina efihlwe ngobuchule emva komkhusane obude. Ukugqibezela ingaphakathi ligumbi lokuhlambela elilinganayo elinebhafu kunye neshawari ephezulu. Ukufudumeza okungaphantsi komgangatho kuhamba kwipropathi yonke, kugcina istudiyo sifudunyezwa kakuhle ngeenyanga ezipholileyo.
Ipropathi ineengcango ezinkulu, eziphindwe kabini ezithatha ubude obupheleleyo bomphambili. Abagcini nje ngokugcwalisa indawo ngokukhanya, kwiinyanga ezifudumeleyo, iingcango zinokuvulwa ngokupheleleyo ukuze kungene ngaphandle. Igadi esecaleni ejonge emazantsi-ntshona ejongene nethafa enkulu egangathiweyo yindawo ethandekayo yokufunxa ukukhanya kwelanga. Dine al fresco kwitafile yokutyela yangaphandle okanye ulale emva kwaye uphumle kwi-tub eshushu.
Indawo yokuhlala ikwinqanaba elinye
Ikhitshi eneplani evulekileyo / yokutyela / yokuhlala / indawo yokulala enobushushu obuphantsi kulo lonke
Nge-oveni yombane, i-induction hob, ifriji enebhokisi yomkhenkce, umatshini wokuhlamba izitya kunye nomatshini wokuhlamba.
Ngetafile, ibhentshi kunye nezitulo ezibini.
Ngesofa, umabonwakude oneFreeview kunye neengcango ezinkulu eziphindwe kabini ezikhokelela kwipatio yegadi.
Nge 5' ukumkani-ubungakanani ebhedini
Ngebhafu kunye neshawari ephezulu, isitya sokuhlambela kunye neWC.
Igadi ebiyelweyo, esecaleni enethafa egangathiweyo enetubhu eshushu, ifenitshala yegadi kunye nerhasi yokosa inyama.
Ukupaka iimoto ezimbini kwindawo yokupaka iimoto ecaleni kwepropathi.
Kwakhona kuyafumaneka ukuba ubhukishe kule ndawo yi-1 Church Cottages (ezilala iindwendwe ezine) ecaleni. Ezi zakhiwo zimbini zinokubhukishwa kunye njengeChurch Cottages & Garden Room (ezilala iindwendwe ezintandathu).
Le holide ngokujonga nje
Kulala iindwendwe ezimbini.
Vula-isicwangciso sokuhlala studio kunye nebhedi yenkosi eyi-5.
Igumbi lokuhlambela elahlukileyo.
Ukufudumeza phantsi komgangatho kuyo yonke.
Indawo yokuhlala ikwinqanaba elinye.
Iingcango eziphindwe kabini zivuleleka kwigadi engasese, evalelweyo enethafa kunye nebhafu eshushu.
Abantwana kunye neentsana bamkelekile.
Ibhedi yohambo kunye nesitulo esiphezulu siyafumaneka xa uceliwe.
Izinja ezimbini eziziphethe kakuhle zamkelekile (intlawulo encinci eyongezelelweyo).
Ukupaka iimoto ezimbini.
Indawo yelali enendlela yeenyawo ukusuka emnyango ukuya eSouth Downs.
Umgama wokuhamba ukuya kwii-pubs ezimbini.
Izimvo eziyi-1 736
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Westmeston